Kismaayo : HN :– Hogaamiyaha maamulka Juba ee ka dhisan magaalada Kismaayo Axmed Max’d Islaam ( Axmed Madoobe) ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose, kaddib safar maalmihii ugu danbeeyayba uu ugu maqnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Dib ugu noqashada Axmed Madoobe magaalada Kismaayo ayaa ku soo beegantay xili xiisad siyaasadeed ee ka d hax oogan tahay maamulka uu hogaamiyaha ka yahay iyo dowladda dhexe.
Safar uu ku tagi lahaa Itoobiya oo horay loo qorsheeyay ayuu madaxweynaha baajiyay,sabab lugu sheegay arrimaha siyaasadeed ee xilligan ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamulka uu hoggaamiyo.
Si weyn ayaa Kismaayo loogu soo dhaweeyay markuu maanta tagay,waxbadana kama usan hadlin madaxweynaha,waxaana la sheegay madaxda maamulka iyo hoggaanka baarlamaanka inuu la shiri doono.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay arrinta maamulka Jubbaland waxaa uu sheegay wax walba oo tabasho ah in ay uga gudbi doonan wada-hadal,waxuuna ku baaqay tanasul in loo sameeyo gaarista qaran xoogleh oo Soomaaliya ka dhasha.